Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Ebe Iji Agba Chinese New Year Na Europe
Chinese New Year, makwaara dị ka Spring Ememme ma ọ bụ ememme Afọ Ọhụrụ, bụ ihe kasị mkpa mere ná Chinese kalenda. Ọ na-a pụrụ iche akara ezinụlọ nnọkọ, nri ememe, àjà na ụlọ arụsị, na - N'ezie - ezimezi oku. Enwere ihe pụrụ iche iji mee ememme Afọ Ọhụrụ ndị China na Europe. Ọ bụ a ohere pụrụ iche iji na-ekere òkè oge ochie Chinese omenala, -akpa azụ 4000 afọ. Ahapụkwala na ya mgbe ị na-enwe ohere!
No.1 for Celebrate Chinese New Year na Europe | Madrid, Spain
N'ihi na nke atọ afọ na-agba ọsọ, na Spanish isi obodo bụ ebe Agba Chinese New Year na Europe na Spain, na a na omenala na festive omume a haziri ahazi nke Chinese Embassy. Concerts, noo, n'okporo ámá parades, na gastronomic ụzọ gasị niile ga-abụ akụkụ nke ememe ndị ẹkenịmde ke Usera district - home of Madrid si Chinatown.
Paris bụghị naanị banyere flashy parades na-esi ọtụtụ decorations ezie. Ya kasị mma-na-ezo ezo n'elu oge a bụ abụọ Buddha ụlọ nsọ ndị dị na nke 13 district. Lee ezinụlọ si China, Vietnam, na Cambodia abịa ịkwụ ụgwọ ha banyere na-anabata na Afọ ọhụrụ. Enwe demonstrations of Chinese nkà na crafts, isi nri, na omenala agba egwu na music. Lee obodo ọkụ n'ezie ndụ ruo ya aha a oge nke afọ. Na ihe kacha mma ị nwere ike ụgbọ okporo ígwè eme njem site na Paris na Amsterdam na usọrọ ma obodo!
fun eziokwu: Amsterdam nke aha ọjọọ Red-Light District bụ n'ụlọ ka a n'ezie Buddha temple. Kwa afọ, Ị nwere ike Ememme Afọ Ọhụrụ ndị China na Europe na Amsterdam na gburugburu The Ọtutu utari; Guang Shan Ọ Hua na a pụrụ iche usoro ihe omume.
London England na-ewe mpako na-etu ọnụ na ọ na-esetịpụ kasị ibu n'ụwa ụzọ usọrọ Chinese New Year na Europe, mpụga nke Asia. Ya mere, n'ezie, nke a bụ otu ka kụrụ mgbe ị na-agba Chinese New Year na Europe.
Nke a obodo esetịpụ a otu ụbọchị ememme nnukota onu juru n'ọnụ na-eme tinyere ọdịnala nri, kwa afọ Nme, arụmọrụ, na omenaala omenaala. (Ị nwere anyị na omenala nri!) Gụọ anyị na!
E nwere mpaghara atọ dị mkpa na England na-eme ememme ndị a; Trafalgar Square, Obodo Chinatown, na Shaftesbury Okporo ụzọ. Onye ọ bụla dị iche na mmemme akọwapụtara yana ihe ha na-enye; ọbịa ga-nwere ike oge nhọrọ nke ime.
Kedu ụzọ kacha mma iji mee ememme Afọ Ọhụrụ ndị China na Europe wee rute n'otu n'ime obodo ndị a? site Train, n'ezie! Iji SaveATrain ka akwụkwọ ndị kasị mma ndibiat na nkeji!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-chinese-new-year-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)